Church of Borgund, Birao ao Borgund - Flåm
Eoropa Norvezy Flom
Adiresy: 6888 Borgund, Norvezy
Phone: +47 57 66 81 09
Ny fananganana trano: fiangonana fiangonana
Fanorenana: 1150-1180 taona.
Toe-javatra: voaaro amin'ny fanjakana
Anisan'ireo fivavahana maro, manaiky mandrakariva ny kôpitalina ortodoksa isika, hankasitraka ireo stade Bouddhistes ary na dia any amin'ny toerana lavitra aza dia maheno antso lavitry ny minaret. Saingy any Skandinavia dia mahazatra ny manorina fiangonana hazo maitso - ny straddle - dikan-teny tokana an'ny fiangonana Kristiana. Izany dia karazana artista manokana sy fahiny. Iray amin'ireo fiangonana tranainy indrindra ao Norvezy .
Fampidirana ny Borgund Church
Ny fiangonana Borgund dia any Norvège any amin'ny faritanin'i Sogn og Fjordane avaratry ny renivohitra, Oslo . Ny rafitra ara-pivavahana dia fantatra amin'ny anarana hoe Briarch ao Borgund (Borgunne). Mino ny mpahay tantara fa anisan'ireo fiangonana tranainy sasantsasany amin'ny karazana skeleta izay mbola velona hatramin'izao. Ny fikarohana ara-dokotera dia nanaporofo fa naorina maherin'ny 1500 ireo rafitra maoderina tao amin'ny faritanin'i Norvezy maoderina. Saingy tao anatin'ny ambaratongam-pahavitrihana samihafa mandra-pahatongan'ny taonjato XXI dia monja monja sisa no navela.
Amin'izao fotoana izao ny fiangonana Borgund dia rafitra manontolo ara-javakanto. Ankoatra ny trano efa tranainy, dia ahitana ny:
Ny fiangonana vaovao, natsangana tamin'ny taona 1868 tamin'ny endriny sy ny endrik'ilay tranainy, izay misy ny lakolosy iray amin'ny fiangonana tranainy amin'ny modely medievaly;
Belfry (taonjato XIII), naverina tamin'ny taonjato faha XX, noho ny rafitra tena izy dia voatahiry fotsiny ny rantsana ambony;
trano fiangonana taloha.
Mino ny arkeology fa ny fiangonana Borgund any Norvezy dia natsangana teo amin'ny toerana nisy trano fivavahana efa ela. Ny endri-javatra dia hita nandritra ny fialan-tsasatra teo ambanin'ny tany. Ny Breadgun Borgund dia miavaka satria ity dia iray amin'ireo trano vitsy natsangana nandritra ny vanim-potoana niova lehibe teo amin'ny tantaran'i Norvezy ary koa ny faharatran'ny piozila tao amin'ny firenena.
Ny porofo amin'izany dia ny fandevenana tranainy tamin'ny miaramila maty tao anatin'ny ady an-trano tamin'ny taona 1177-1184. Hatramin'ny taona 1877 dia ny fikambanana manontolo ho an'ny fiarovana ny fahatsiarovana ny rakitry ny ela ao Norvezy. Ao amin'ny Borgund tsaratsara dia misokatra ny tranom-bakoka, miresaka momba ny Fivavahana any avaratra sy ny seranana mahazaka.
Inona no mampiavaka ny Bentgran?
Tena mahaliana ny zava-misy momba ny tempoly, izay hilaza amin'ny tompon'ilay tranombakoka, ireto manaraka ireto:
Ny mpahay siansa dia manoro hevitra fa ny borgund church dia naorina manodidina ny 1150-80 ho fanomezam-boninahitra an'i Andrew ilay Voalohany antsoina. Nanamboatra azy ireo tao amin'ny fitaovana masina izy ireo tamin'izany fotoana izany - lavenona. Ao amin'ny angano ny Scandinavians, ny lavenona dia ny Tontolon'ny Tontolo izay mampifandray ny lanitra, ny tany ary ny fanjakan'ny maty, ary ny satroboninahitra, Valhalla, no fonenan'ny andriamanitra rehetra.
Ny tandindon'ny St. Andrew, izay niantsoana voalohany - dia nirakotra ny fefy teo amin'ny galleries ambony. Ny lafiny iray mahaliana dia ny fananganana skoto ara-panorona amin'ny tafo ambony: izy ireo dia novonoina tamin'ny endrika dragona. Eken'ny mpahay tranomaizina fa ny mpamboly dia manandrana ny fiangonan'i Borgund mba hampiditra sary maromaro momba ny mpanompo sampy sy vao tonga. Ohatra, ny karazam-pandrosoana misy andian-tsambo amin'ny loha-bibilava dia voahodidin'ny vavahady vy ao amin'ny vavahadin'ny tandrefana.
Ny endriky ny trano fiangonan'ny fiangonana dia nalaina tamin'ny loko marevaka ary niravaka be. Ny sisa tavela tamin'ny loko dia notehirizina raha ny amin'ny lavenon'ny lavenona sy ny tsipiriany kely momba ny famolavolana. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, dia nisy ny mari-pamantarana manan-danja ao Norvège, ny Fiangonana Borgund, voaaro tanteraka - voajanahary feno harena. Noho izany dia mena mainty izy, saingy mbola velona hatramin'izao.
Ny lova ara-kolotsaina ao amin'ny tsatòkan'i Borgund dia tsy nisy fanovana lehibe teo amin'ny teknolojia sy fanodinana. Ny teknôlôjia sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao trano fahiny no tena zava-miafina, noho izany dia naharitra efa ho 900 taona ny rafitra ara-pivavahana nahaliana. Tsy nandalo ny fiangonana ny afo, fa ny mpanao asa tanana mahay dia nampody indray izany isaky ny mandeha.
Ny teknolojian'ny fananganana bitch
Rehefa nianatra momba ny fitaovana sy ny endriky ny aritry ny fiangonana Borgund any Norvezy dia nanambara ny lafiny teknolojika ao amin'ny rafitra misy azy:
Ny hazo rehetra nampiasaina tamin'ny fanorenana ny tsatòka dia notanana teo am-pototry ny tany mba hahatonga ny taran-kazo ho tonga eny ambonin'ny tany. Ary taorian 'izay dia nokapaina sy nokasihina izy ireo. Ity teknika ity dia mampitombo ny androm-piainan'ny rafitra rehetra.
Ny tsangambato boribory rehetra, izay manohana ireo kodiarana ambony, dia vita amin'ny ampahany voajanahary voajanahary amin'ny lohalika hazo. izany hoe Ireo singa ireo dia mitovy endrika amin'ny natiora mba hitazomana enta-madinika avy any ambony.
Ny fiangonana ao Borgund dia ahitana singa mihoatra ny 2000, saingy tsy misy metaly eo anelanelan'izy ireo ka tsy manomboka matevina sy maina ny hazo. Ity fomba fanorenana ity dia tena sarotra sy miasa.
Natao tany am-piandohana ny endriky ny tranom-barotra, ary avy eo dia natsangana teo an-tampon'ny fototra vato izy ireo tamin'ny fanampiana ny lava-bato lava be.
Ahoana no hahatongavana any am-piangonana?
Tsara kokoa ny mankany Breadth amin'ny bus avy any Oslo, ny fijanonanao dia Borgund stavkirke. Ny fiangonana Borgund taloha dia nandalo ny lalana 630 Oslo-Lerdal, nitodika tany Borgund, 25 km miala an'i Lerdal. Ny fitsangatsanganana any Norvège tsy miankina, tarihin'ireo kôdôraty: 61.047297, 7.812191.
Ireo mpankafy ny fandehanana an-tongotra sy ny bisikileta dia entanina handehanana eo amin'ilay lalana manan-tantara any Vindhellavegen. Tsy mandalo intsony izy io ary toy ny lalana manomboka eo amin'ny tokonam-borona ao Borgund. Ny mandeha an-tongotra dia eo amin'ny 1,5 ora eo amin'ny teboka roa.
Ny tranom-bakoka dia misokatra amin'ny famangiana amin'ny lohataona ny 11 jona hatramin'ny 21 aogositra amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 20:00 isan'andro, ary ny sisa hatramin'ny 10:00 hatramin'ny 17:00. Ao amin'ny faritany dia misy trano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny ary fivarotana fahatsiarovana.
Bidding in Urnese
Monastera ao Tvrdos
Ny nosy St. George
Ahoana no fomba hitadiavana ny akanjo amin'ny akanjo?
Pulpitis - Ny soritraretina sy ny fitsaboana
Sokafy amin'ny mofomamy
Ny kitapom-bolan'ny vehivavy - ankoatra ny lamaody an-tsokosoko
Spathiphyllum: ny ravina dia mihodina mainty
Loko miloko mena miditra - afovoany tsara tarehy
Serena Williams niaraka tamin'ny zanakavavy iray 4 volana dia niseho teo amin'ny fonon'ny Vogue
Fangatahana fampakaram-bady mahazatra 2016
Trano fidiovana ho an'ny trano fatoriana
Mpangalatra vy amin'ny kisendrasendra
Ny endrik'i Evelina Khromchenko
Volokano koro ho an'ny fitomboan'ny akanjo lava
Hairy mitambolimbolina amin'ny volon'ny volo 2015
Ny taonan'ny maizina dia toetra iray